Interior design design - Architect interior designer Bucharest - Interior design houses Constanta - Nobili Interior design, studio, architect, designer, companies, design, prices
Inyiro yekugadzirisa mabasa emitengo
Shandisa Social Media!
An mukati magadzirirwo chirongwa kunosanganisira kutanga pfungwa tsika, nemamwe nerimwe nemhosva, saka kana iwe wakawana pachako uri manyorero kugadzirwa ari Portfolio ndechekuti uri zvakasiyana, mumwe munhu akasiyana nevamwe munzira yacho uye iyo yakagadzirwa nemunhu wega wega yatinokugadzirira iwe zvechokwadi ichakumiririra iwe zvakakwana kuratidza mararamiro ako uye unhu hwako.
Danho rokutanga - tibata nesu kana kutumira hurongwa hwekuvaka huri kuronga kuronga kuitira kuti uwane mupiro wekutengo uye nyanzvi dzedu dzichakutarisa iwe nekukurukura zvakadzama uye pakuguma kwemusangano.
Mutengo unopa we 3D project inofanirwa iwe pachako uye yakagadzirirwa maererano nepamusoro uye sarudzo yakasarudzwa. Pamusangano wokutanga tichakurukura muudzame chokuita wemapoka muimba imwe neimwe nyaya, isu kudoma manyorero munharaunda Amenities uye pashure chibvumirano achashanyira nzvimbo kuti kurongwa kuongorora kukura kutanga yokunyora nokudhirowa uye tichiswedera zvinyorwa mutsva kana kuchinja kuti tumisoro.
Kusika umhare namaapuro chirongwa zvinoda maawa akawanda okunyatsoshanda, kudzidza kwemabhuku zhinji izvo isu kusarudza zvigadzirwa zvakanaka chakakodzera kunyanya manyorerwo uye kwete mudukusa yakarurama mari yeGmail.END_STRONG zvinogadzirwa kuti incadrandu- isu tichabva tavapa kune muteereri kuitira kuti mugumisiro wekugadzirwa kwemukati uchave wakafanana nemujekiti ye3D.
Tinopa vateereri vedu nerutsigiro runodiwa kuti tishandise purojekiti yekugadzira kuitira kuti vasarudze imwe yezvikwata zvitatu zvebasa zvakasikwa maererano nezvavanoda.
Nobili Pro INTERIOR ZVIMWE BASA (3D mhando yevanhu, mapeji emapurojekiti, zvinhu zvinopa)
- Dzimba, dzimba dzemazuva ano dzinotengesa 14-19 euro / sqm, zvichienderana nepamusoro uye nechokumudzivirira.
- Matumba, mapoka ezvidzimba zvekare anotengesa 16-22 euro / sq m, zvichienderana nepamusoro uye rudzi rwekuparadzanisa.
- Apartments, studios mitengo 20-30 euro / sqm zvichienderana nepamusoro uye maitiro akasarudzwa.
Planning uye nzvimbo Optimization, 3D design, fenicha design, photorealistic mifananidzo, mepu magadzirirwo (yokunyora nokudhirowa 2D pamwe zvemagetsi uye utsanana zvivako, vanodhirowa 3D pamwe fenicha creat- pamwero vanodhirowa akasika ceilings, repartitioning, etc. The mutengo kuti zvinhu zvavakanga -yakashandiswa mumushandi, zvigadzirwa zvatinopa zvakananga).
CHIKAMU CHINOKUDZIDZA KUNYANYA KUNYORWA (KEY) - mitengo Pakukumbira
Planning uye nzvimbo Optimization, 3D design, fenicha design, photorealistic mifananidzo, mepu magadzirirwo (yokunyora nokudhirowa 2D pamwe zvemagetsi uye utsanana zvivako, vanodhirowa 3D pamwe fenicha creat- pamwero vanodhirowa akasika ceilings, repartitioning, etc. Ofeta mutengo nezvinhu iwe -yakashandiswa mumushandi, zvigadzirwa zvatinopa zvakananga).
Project management inosanganisira:
Yekuva zvibvumirano zvokuvaka uye mukati kana pane kare namaapuro zvakasimba vakazvipira kubatsira uye ekufambisa basa panzvimbo (yekuronga matanho kushanda, vachiongorora uye vachiongorora basa kuti asangane basa kugadzirwa).
-Kuenzaniswa kwevashandi vefenicheni pahurongwa (kutevera nekuongorora kugadzirwa kwefambisi kuitira kuti vaone pfungwa yakagadzirwa uye michina yekufambisa yemafesheni mumushandi wekugadzira).
-Kuenzaniswa kwefenicha yekuunganidza muItaly, kutevera kuendeswa uye kuiswa kwefaira yakarayirwa.
-Kuburitsa kwekushandisa uye kuiswa kwezvinhu zvose zvakawedzerwa purojekiti.
Kuti tikwanise kupindura zvikumbiro zvevatengi vedu kubva kune dzimwe maguta munyika uye kune dzimwe nyika takasarudza:
YOKUSHANDISA KUTI KUTI KUDZIDZIRWA KUNYIKA
- mutengo 14-19 euro / sqm yeimba, dzimba dzemazuva ano.
- 16-22 euro mp mitengo yezvivakwa zvekare.
- mitengo 22-35 euro / sqm yezvivako, studios.
-Tumira zvivakwa zvekuvaka nemifananidzo kubva mukati kuenda kune e-mail yekero inotaurwa panzvimbo ino.
-Kuva nguva pfupi iwe uchagamuchira mupiro wekutengesa uye iwe uchasangana nekambani yechipanzvi uyo achatsanangura kuti basa iri rinoshanda sei.
-Kubvuma kugamuchira kwako, uchawana fomu yakagadziridzwa yaunoda kuzadza uye kuitumira kuburikidza nemavhura. Iri pepa inoda ruzivo pamusoro pekuenda kwekamuri rimwe nerimwe, mararamiro ekushongedzwa akasarudzwa uye mamwe akawanda ezvingatibatsira kuti tive nepfungwa chaiyo yaunoda.
-Ikugadzira nzvimbo yako mu 3D (isina kurongwa) uye tichakutumira mapuraneti e3D kuti iwe ubvume uye usimbise kupatsanurana, mushure mekunge uchishanda pane chirongwa che 3D chemukati. Munguva ino yose, ticharamba tichitaura nefoni uye kutumira kuti tibatane pamwe chete uye tiwane mugumisiro wakanaka.
-Zvamungaita chirongwa wagadzirwa, uchaita kugamuchira tsamba yokutanga kutotanga 3D vanodhirowa uye ipapo, pashure pakugamuchira pasuru kubudikidza rekutakura kugamuchira chirongwa forodha kuti rine zvose Data zvaidikanwa Implementation chirongwa (yokunyora nokudhirowa 2D pamwe zvemagetsi uye utsanana zvivako, vanodhirowa 3D pamwe fenicha creat- pamwero vanodhirowa akasika ceilings, repartitioning, etc. ofeta mutengo nokuda zvinhu kuti isu wakashandiswa racho zvinhu iwe zvinopa zvakananga). Chero kuchinja kuti unoda kuunza richaitirwa tisingadi zvinoda okuwedzera mari. We kuramba vachikurukurirana uye ticharamba kubatsira kuti pave chirongwa magadzirirwo kuitira kuti kuguma mugumisiro ichange yakanyatsoenzana basa 3D kuburikidza nokugadzirira kutsigira budiriro kambani kuti zvinoshanda uye nokupa zvinhu waita anoshandiswa basa 3D. Chero mhando mukati zvakagadzirwa chirongwa yaunosarudza (musha, Villa, furati, hotel, restaurant, nemizariro, chitoro, zvokurapa kiriniki, runako Salon mugeri) isu kune nzvimbo yako hapana imwe mutengo kuti chikumbiro vakabvuma pfungwa 3d mukati patani. In mhedziso, kana muri kuCluj Napoca, Timisoara, Oradea, Aradhi, Sibiu uye Hunedoara kuzvitenga chete mutengo kuti chirongwa kugadzirwa sezvo mutengi muBucharest, Constanta, Giurgiu, Calarasi, Galati, Tulcea, Craiova, Brasov uye Prahova . Relations runhare: 0720.665.365
Services kambani mukati design, mapurani shanduro 3d, mukati, dzimba chaiwo, ano, mitengo kubva 17 euros mita (kwokupedzisira kupa mutengo kuti mukati design muzvirongwa rinowanikwa maererano nokuwanda mativi metres vakavaka, kwete. Of dzimba manyorerwo kusarudza uye kunzwisisa chirongwa pasi Implementation) muna Constanta, muBucharest, Ploiesti, Brasov, Pitesti, Galati.
Category nyaya basa zvokunyaradza design, mukati design, kambani, hofisi, imba zimbabwe, ano, koteji chaiwo mukati kugadzira mitengo, maresitorendi, nembariro, cafes, hotels, hostels, zvitoro, vanokudzwa zvokunyaradza magadzirirwo mabasa, magadzirirwo, mapurani 3d , muBucharest, Constanta, Brasov, pitesti, Ploiesti, galati, kuCluj, Timisoara, ezvivako, mukati ezvivako kugara, kugara mapurani, vagadziri dzimba akitekiti nguva dzose mutengo.
Kuti kubudirira kwemukati wekugadzirwa kweprojekiti kuve kwakatsigirwa, kushevedza kuti maitiro eimba yekugadzira yakasimba ndiyo chisarudzo chakanakisisa. Iko mukati mekugadzira micheka yakasiyana uye ine zvimwe zvinhu zvinowanikwa, uye mumwe mutengi anoda kuisa mararamiro ake pakugadziriswa kana kupembererwa kweimba yake, imba kana imba. Saka Noble Interior Design ndiye akakwana sarudzo kuti zvakagadzirwa muzvirongwa kukanganiswa zvokutengeserana (resitorendi, nemizariro, hotel, mbatya chitoro, Hairdressing Salon, zvokurapa kiriniki) kana Rezindential (dzimba, Apartments). Kuva musika Vatungamiri kubva 2008 uye pamusoro 250 zvaMambo mukati zvakagadzirwa uye mapurani chinozoiswa guru mumaguta mikuru Romania uye muBucharest, Constanta, Brasov, Ploiesti, Craiova, Giurgiu, Galati, Braila, Tulcea, Calarasi, Bacau, Suceava , Focsani, Vaslui, vanokudzwa mukati magadzirirwo proposes mhinduro anokosha uye Implementation nokuda mabasa ose akasiyana zvokunyaradza kugadzira. Nzvimbo imwe neimwe muimba kana imba yaunoda kufanira nayo inofanira kusanganisira zvikamu zvehutano hwekusarudzwa mukati mekugadzira chimiro uye zvinomiririra zvaunofarira zvekugadzira uye mukati mekugadzira. A classic interior design style, inoda chromatics yakazaruka, huni hwehuni hunogadzirwa kubva kuItaly, bhandi rakagadzirwa nemapurasitiki uye zvigadzirwa uye kupedzisa zvakasarudzwa kubva kumusoro kweEurope vadzidzisi nevatengi. Zvinhu zvakakura semaminaire zvakadai semakanda kana kunyange zvikwangwani zvekushongedza nezvimwe zvinhu zviduku zvakadai zvinounza mberi mberi kwekugadziridzwa kwemukati wekambani yekugadzira chimiro. Unhu hwekupedzisa huchaita kuti kugadzirisa kwezvinhu zvakagadzirwa nenzira iyi yemukati wekugadzira uye mukati mekugadzira. Zvechokwadi, sarudzo imwe neimwe ichave yakakonzerwa nemikana yevashandi inokwanisika uye inonaka. Pamwe chete nemagadziri uye vogadziri paNobili Interior Design, mutengi achakwanisa kuona 3D mukati mekugadzira basa risati rasvika. Kana imwe nguva chiedza chemavara chichipiwa, nyanzvi dzinotanga basa iri rekugadzirwa kwemukati, kutaurirana nemutengi ari mubvunzo mubasa rose. Architects pamasikiro uye mukati magadzirirwo zvakasimba ichanyanya nokutamba yakawanda yaishandiswa nzvimbo sezvo chero uchida kuronga imba, furati, hotel, restaurant, chitoro kana runako Salon. Nobili Interior Design ndiro tarenda ine tarenda ayo mazano anoyevedza akaisvonaka, uye mugumo wekupedzisira uchakushamisa iwe. Titumirei ne email (nobilidesign [@] gmail.com) 2d mifananidzo uye mazwi mashoma pamusoro pekuti unoda kuratidza sei imba yako kana bhizinesi. Inofungidzirwa mari inoshandiswa mukati mekugadzirwa kwemabasa mabasa: Inhizha design classic style dzimba mutengo 16-22 euro sq ft pasina VAT. Imwe mukati mekushongedzwa kwemazuva ano dzimba dzichibva ku15 kusvika ku19 euro sq ft pasina VAT. Inyanzvi yekugadzira nzvimbo dzekutengesa nzvimbo dzinotengeswa 14 - 25 euro sq. Pasina tva. Mutengo wose wekugadzirwa kwemukati kunopesana maererano nesarudzo yakasarudzwa, kugoverwa uye nhamba yemakamuri, kuoma kunzwisisa uye zvinodiwa zveprojekti. Taura nemugadziri wemukati mugadziri Gabriela Nechifor.
Our zvakagadzirwa mukati kuvimba mutengi zvinodiwa uye mapurani zvawakaratidzwa nyanzvi. With chikwata vanachiremba rinoumbwa mapurani, mukati mugadziri, kunze, mugadziri fanicha riri shure mumwe chirongwa vachagamuchira mazano akanakisisa negadziriso yomukatikati akaitwa imba, furati, kana Villa, pasinei guta apo muri. Prices 3D mukati magadzirirwo chirongwa rinotanga pana 17 euros / sqm, kusiyanisa zvichienderana nzvimbo edzimba, nhamba edzimba kuti akamisa uye chokwadi yomukati kugadzirwa sarudzo. Mumwe manyorerwe kukura kunoda mushandirapamwe, kubatsirana uye mazano nenyanzvi.